Balanbaarista baaritaanka: astaamaha, sida ay u shaqeyso iyo waxa loogu talagalay | Saadaasha Shabakadda
El baar buufin ama buufinka stratospheric waa buufin awood u leh inuu ku socdo isweydaarsi si loo soo qabto macluumaadka ku saabsan deegaanka. Stratosphere waxay ku taalaa dherer udhaxeeya 11 ilaa 50 kiilomitir waana meesha lakabka ozone ku yaalo. Waxyaalaha u gaarka ah ee balooniga baaritaanka ayaa ah inay u adeegto sidii aalad cilmi baaris cilmi ah oo ay ugu mahadcelineyso awoodda ay u leedahay inay ku sameyso duulimaadyo xasilloon muddo dheer qayb ballaaran oo jawiga ka mid ah. Gawaarida kale sida diyaaradaha ama gantaalada baaritaanka ma joogi karaan heer sare mudo ah si ay u helaan macluumaad ku filan.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa dhammaan astaamaha, utility iyo sida loo isticmaalo baaritaanka buufinka.
2 Noocyada baaritaanka buufinka
3 Qalabka iyo dhismaha
4 Bilaabida biibiilaha baaritaanka
Hawlgalka buufinkan baaritaanka wuxuu ku saleysan yahay mabda 'Archimedes'. Waxay ka faa'iideysaneysaa riixitaanka kore ee gaas ka fudud hawada. Sida caadiga, hydrogen ama helium waxaa loo isticmaalaa qayb ku filan si aad ugu balaadhiso kululeeyaha jawiga. Waxay leedahay nidaam laba qaybood oo waaweyn ka kooban: buufinka laftiisa iyo waxa loogu yeedho tareenka duulimaadka ee ay ku yaalliin aaladaha lagama maarmaanka u ah si ay macluumaad uga helaan baaritaanka.
Aynu aragno qalabka ay tahay inaad ku hesho macluumaad:
Waxay leedahay farsamo u adeegta kala soocidda culeyska.
Waxay leedahay a baarashuud si aad dib ugu soo kaban karto oo aad si tartiib tartiib ah u qalabayn karto adigoon dhaawicin
Waxay leedahay nidaam isgaarsiineed si ay u awoodaan inay u helaan una soo gudbiyaan amarrada isla markiiba labadaba adduunka iyo sidoo kale aaladaha saaran.
Nidaamkeeda telemetry-ku wuxuu awood u leeyahay inuu si sax ah u cabbiro dhererka, heerkulka, cadaadiska iyo booska nidaamka oo dhan dherer kasta.
Waxay leedahay milicsiga dadban sida radar.
Waxay leedahay farsamooyin kala duwan oo lagu doorto ballast.
Ilaha awoodeeda ugu weyni waa baytariyada iyo, safarada dheer, baalayaasha ku shaqeeya cadceeda.
Waxay kuxirantahay nooca indha indheynta, culeyska bixinta badanaa waxaa la dhigaa qaab dhismeedka weelka ee loo yaqaan gondola. Gondola waxaa loo isticmaali karaa ugu horayn in lagu ilaaliyo qalabka wax lagu cabiro. Arooskani wuxuu mas'uul ka yahay jilicsanaanta saameynta markii uu soo degayo ama wuxuu faa'iido u leeyahay ku darista habab aad u sax ah oo tilmaamaya ama weelal cadaadis leh.
Noocyada baaritaanka buufinka
Waxaa jira noocyo badan oo tuubooyinnada buufinta leh iyadoo kuxiran ujeeddada ugu weyn. Marka laga reebo noocyada jira qaab ahaan, cabir ahaan, qalab ahaan ama qaab dhismeed, waxaan ku koobnaan doonnaa nafteena in loo qaybiyo noocyada buufinnada baaritaanka iyadoo loo eegayo shaqadooda. Waxaa jira buufinno furan oo xiran.
Buufinnada baaritaanka furan ayaa sidoo kale loo yaqaan magaca eber cadaadis. Qeybtooda hoose waxay u furan tahay qaab markii gaasku kaco uu sii ballaadho illaa uu ka gaadho xaalad isu-dheellitiran oo u dhexeysa cadaadiska dibedda iyo gudaha. Kordhin kasto oo ku timaadda cadaadiska gudaha kuleylka ay soo saarto qorraxda, waxaa si otomaatig ah loogu magdhabaa iyadoo loo marayo marin dabiici ah ee gaaska ka imanaya qeybtiisa hoose ama iyadoo la sifeynayo tuubooyinka ku xiran.
Buufinada baaritaanka xiran waa kuwa lagu yaqaan magaca superpressure. Kuwani waa qaybo gebi ahaanba xidhan oo biyo-diid ah oo aan u oggolaanaynin inay hawadu soo gasho ama gaas ka baxsado. Marka uu kordho cadaadiska gudaha inta lagu jiro fuulitaanka waxaa lagu taageerayaa baqshadda la xoojiyay ee buufinka. Baqshaddani waxay awood u leedahay inay ku ballaadhiso si ay u gaadho meesha ugu sarraysa oo ay u gasho xaalad isu-dheellitiran, oo ka ilaalinaysa inay kor u kacdo.
Qalabka iyo dhismaha
Baalalka baaritaanka waxaa laga dhisay qalab kala duwan oo leh dabeecad caag ah. Mid ka mid ahi waa polyetylen iyo waxyaabo kale oo isku dhafan oo leh iskudhafyo kala duwan oo iyaga laga soo dheegtay. Badanaa waxaa lagu daaweeyaa filimaan yar oo mitir qaro weyn oo keliya. Tani waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo aad u fudud oo caag ah oo caag ah oo u adkeysan kara xaalado kala duwan, inkasta oo ay aad ugu jilicsan yihiin maaraynta.
Soo saarida noocan ah buufinta baaritaanka, qeybaha kala duwan ee walxaha aan soo sheegnay waa la jaray oo ay ku wada jiraan nooc ka mid ah kuleylka oo leh xabag si qaas ah loo soo saaray si loogu buuxiyo culeys aad u badan buufinka. Qaybta sare ayaa ku lifaaqan waxaana lagu daray saxan walxo caag ah oo u adeegi doona buufin buufin ka hor inta aan la furin qalabka. Tani waxay u oggolaaneysaa gaaska inuu baxsado. Dhinaca hoose, giraan aluminium ah ayaa la dhigayaa oo xiraya, in kasta oo aanu gebi ahaanba ahayn, oo inta kale ee tareenka duulimaadku ku xidhan yahay.
Si aad u awoodo inaad dhisto buufinta baaritaanka noocan ah, kaabayaal aad u ballaaran ayaa loo baahan yahay oo leh goobo shaqo oo ballaaran oo lagu jaro laguna dhajiyo qaybta hoose. Xilligan waxaa jira shirkado yar oo awood u leh inay dhisaan. Waxay qaadataa qiyaastii mug ku dhow hal milyan oo mitir cubic oo, markii la dhammeeyo, waxay leeyihiin aag buuxa oo ah hektar dhowr ah.
Bilaabida biibiilaha baaritaanka
Ujeeddada ugu weyn ee wejiga bilowga ayaa ah in lagu guuleysto kor u qaadista tooska ah iyada oo aan waxyeello loo geysan buufinka. Waxaa jira farsamooyin furitaan oo kala duwan. Mid kasta oo iyaga ka mid ahi wuxuu ku kala duwan yahay aasaas ahaan hadba halka ay ku taallo. Waa inaan tixgelino xaaladaha jawiga, nooca xamuulka la qaadayo iyo mugga buufinka la bilaabayo.
Noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'launching' ayaa loo yareeyey laba nooc: soo-saaris joogto ah oo booska buufinku buuxay lagu hagaajiyo si dabiici ah oo uu ugu fadhiyo culeyskiisa. Bilowga firfircoon ayaa ah kaas oo loo adeegsado gawaarida xamuulka ah xamuulka hoosta buufinka iyadoo kor loo qaadayo si loo helo marin.
Inta lagu jiro fuulida buufinka waxay bilaabeysaa inay ku soo rogto xawaare la xiriira miisaanka setka iyo qaddarka dheeriga ah ee gaaska xumbada waxaa lagu duraa inta lagu gudajiro sicir bararka taas oo loo yaqaan 'impulse free'. Qaybta ugu halista badan ee duulimaadku waa tan ay ku gaadho tropopause. Tani waa halka ay ka jirto kuleylka kuleylka oo sababi kara xoogaa guuldarooyin ah yeyda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto balooniga baaritaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Buufin baaritaan